आँखा चिम्लेर भिरमा हाम फाल्न खोजेका का. कृष्ण थापा - NepaliEkta
238 जनाले पढ्नु भयो ।
गिरिप्रसाद बुढा ##
जब पार्टीले का. कृष्ण थापाको सांसद पद नरहने फैसला गर्यो, त्यसपछि का. कृष्ण थापा आफ्नो पदको रक्षार्थ सर्वाेच्चमा पुगे । उनी सर्वोच्चमा पुगेपछि सर्वाेच्चले उनकै पक्षमा फैसला गर्यो । यसरी आफ्नो चित्त नबुझे अड्डाअदालत धाउनु र हारजित हुनु वर्तमान राज्यव्यवस्थाभित्रका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन । यस प्रकारको स्वाभाविक प्रक्रियामा सर्वाेच्चले गर्ने फैसला कति सही वा गलत हुन्छन् भन्ने विषय छुट्टै छलफलको विषय हुन सक्छ तर हिजोआज कतिपय व्यक्तिले का. कृष्ण थापाको सन्दर्भमा पार्टीले गरेको फैसला गलत भएको तथ्य सर्वाेच्चले नै प्रमाणित गरिदिएको कुरा व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ, जुन गलत छ ।
← दक्षिण भारत क्षेत्रीय समितिद्वारा बबिता गायकप्रति श्रद्धाञ्जली
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक भन्छिन्- यो संवैधानिक अपराध हो →
पत्रकारीता के हो र यसलाई कसरी बुझ्ने ?
10 October 2020 Nepaliekta 0
मार्क्सवाद बारे मेरो अध्ययन
18 April 2020 19 April 2020 Nepaliekta 0
मैले बुझेको मार्क्सवाद